What is suspension from work? (Part – 2) ﻿
What is suspension from work? (Part – 2)
အလုပ်မှရပ်နားခြင်း (Suspension) ဆိုသည်မှာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? (အပိုင်း - ၂)
မနေ့က စာရိတ္တနှင့် ကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်ပြားမှုကြောင့် အလုပ်မှ suspend ပြုလုပ်ရတဲ့ပုံစံများကို ကျွန်တော်တို့အတူလေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ ကျန်းမာရေးကိစ္စများကြောင့် suspension ပြုလုပ်ရပုံများကို ဆက်လက်၍ လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင် . . .
ကျန်းမာရေးအခြေအနေများကြောင့် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အလုပ်မှယာယီရပ်နားခိုင်းခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ်၍ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတော့ ဝန်ထမ်းဟာ လစာကိုအပြည့်အဝ ခံစားခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Medical suspension ကို ဝန်ထမ်းတစ်ဦးရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ လုံခြုံမှုတို့ထိခိုက်နိုင်ခြေရှိနေတဲ့ အခါမျိုးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ -
• ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များရဲ့ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ချေများကိုလေ့လာမှုပြုလုပ်ရာတွင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရာတွင်ပါဝင်နေတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတစ်မျိုးဟာ အန္တရာယ်ရှိသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်တွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ နောက်ထပ်အသေးစိတ်လေ့လာစစ်ဆေးမှုများ မပြုလုပ်ရသေးမှီတွင် အလုပ်သို့လာရောက်ရန်မသင့်လျှော်သောကြောင့်။
• ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဟာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေများကြောင့် ကာလကြာအလုပ်မှခွင့်ယူထားခဲ့ပြီး အလုပ်ရှင်မှ အဆိုပါဝန်ထမ်းအနေနဲ့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်ရက်ထက်စော၍ အလုပ်လာဆင်းကာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေများပိုမိုဆိုးရွားလာမည်ကို စိုးရိမ်သောကြောင့် (သို့) လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် သင့်/မသင့်ကို အရင်ဦးစွာစစ်ဆေးကြည့်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်။
ကျန်းမာရေးအခြေအနေများကြောင့် အလုပ်သို့ယာယီမလာစေခြင်းကို နောက်ဆုံးသောဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုအနေနဲ့သာ ထားရှိအသုံးပြုသင့်ပြီး အခြားသောဝန်ထမ်းများမှလည်း ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပြုသယောင် ထင်မြင်လာနိုင်တတ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် အထက်တွင်ပြောကြားသွားခဲ့သည့်အတိုင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ချို့ယွင်းမှုဖြစ်စဉ်များတွင်သာ အများအားဖြင့် ထိုသို့ခွင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကို ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် suspend ပြုလုပ်ခွင့်မပေးမှီတွင် ဆေးဝါးပညာကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြည့်သင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော်/ ကျွန်မတို့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာ အကြီးတန်းမန်နေဂျာများထဲကတစ်ဦးက လက်အောက်ငယ်သားတစ်ဦးကို sexual harassment ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း တိုင်တန်းချက်ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျူးလွန်ခဲ့သူက လုပ်ငန်းတွင် အဓိကအရေးကြီးတဲ့နေရာက ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထိုအကြီးတန်းမန်နေဂျာများကို suspend ပြုလုပ်မယ့်အစား တိုင်ကြားလာတဲ့သူကို ဖယ်ရှားလိုက်ရင် အဆင်ပြေမလား?
သင်ဒီလိုတွေးနေရင်တော့ အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေအတွင်းကို သင်ကျရောက်နေပါပြီ။
အားမနာတမ်းပြောရမည်ဆိုပါက လုပ်ငန်းစီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းမှုကို သင့်ဝန်ထမ်းများရဲ့လုံခြုံရေးထက် အရေးကြီးတယ်လို့မှတ်ယူမိခြင်းဟာ သင်ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်လိုက်တာဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အထက်ကပြောကြားသွားခဲ့တဲ့အတိုင်းသာ လက်တွေ့မှာလုပ်ကိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သင့်အနေနဲ့ဝန်ထမ်းများကို ပေးလိုက်တဲ့ message ဟာ ထိုအတိုင်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ ခွဲခြားဆက်ဆံရာလည်းရောက်တဲ့အတွက် ထိုသို့လုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် သင့်လုပ်ငန်းအတွက် ရေရှည်တွင်ထိခိုက်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ် ထိုဝန်ထမ်း ၂ ယောက်စလုံးကို အတူတူတွဲမလုပ်ရရန်စီစဉ်ပေးရင်ရော?
ဒီအချက်ကဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကပြောခဲ့သလိုပဲ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ ရွှေ့ဆိုင်းခြင်းကလည်း သင့်ရဲ့အခြားသော ဝန်ထမ်းမိသားစုဝင်များကို အလားတူအဖြစ်အပျက်မျိုးနဲ့ ထပ်မံ၍ကြုံတွေ့လာရစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ အထက်ပါအကြီးတန်းမန်နေဂျာများကို work from home ပြုလုပ်စေပြီး အခြားသောဝန်ထမ်းများနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုမရှိစေတဲ့ အလုပ်များကိုသာ ခိုင်းစေဖို့ စီစဉ်ကောင်း စီစဉ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဝန်ထမ်းများအပေါ်ဂရုစိုက်ကြောင်းနဲ့ သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအပေါ် အလေးပေးကြောင်းပြသရန်မှာ ထိုပြဿနာကို အမြစ်ဖြတ်ဖြေရှင်းဖို့မှ အခြားမရှိပါဘူး။
ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကို ဘယ်လို suspend ပြုလုပ်သင့်သလဲ?
အကယ်၍ ထိုသူကရုံးမှာရှိနေပါက သီးသန့်ခေါ်၍တွေ့ဆုံမှုပြုလုပ်ပြီး သူတို့ကို suspend ပြုလုပ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဘာကြောင့်ထိုသို့ suspend ပြုလုပ်ရသလဲဆိုတာကို အိမ်သို့ပြန်မပို့မှီတွင် အသိပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ ရုံးမှာရှိမနေပါကလည်း၊ ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီး အထက်ပါနည်းအတိုင်း ပြောဆိုအသိပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာဖြင့်လည်းအကြောင်းကြား၍ suspend ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Letter of suspension တွင် အောက်ပါအချက်များကတော့ မပါမဖြစ် ပါဝင်နေရမယ့်အချက်များပဲဖြစ်ပါတယ် -
• သူတို့ suspend ပြုလုပ်ခြင်းခံရတဲ့အကြောင်းအရင်း (ဥပမာ - စည်းကမ်းမလိုက်နာ၍၊ ကျင့်ဝတ်များချိုးဖောက်ခြင်းကြောင့်၊ အစရှိသည်ဖြင့်)
• Suspension ပြုလုပ်ခြင်း၏ terms များ (ဥပမာ - လစာအပြည့်ပေးခြင်း၊ အလုပ်နေရာ/ ရုံးနေရာသို့ မလာရန် ကန့်သတ်ခြင်း၊ အစရှိသည်ဖြင့်)
• သူတို့ရဲ့ suspension ဟာ ဒဏ်ခတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်း။
• Suspension ပြုလုပ်ခြင်းဟာ ဘယ်ကာလမှ ဘယ်ကာလအထိကြာမြင့်နိုင်ကြောင်း။
• သူတို့ရဲ့ suspension နဲ့ပတ်သက်ပြီး မည်သည့်သူကိုဆက်သွယ်၍ မေးခွန်းများမေးမြန်းနိုင်ကြောင်း။ အစရှိသည်တို့ကို ထည့်သွင်းရေးသားပေးသင့်ပါတယ်။